सिधाकुराको नयाँ भाग हेर्नुस्। सिके राउत भन्छन जे ग’र्यौ ठिक ग’र्यौ!:: Mero Desh
सिधाकुराको नयाँ भाग हेर्नुस्। सिके राउत भन्छन जे ग’र्यौ ठिक ग’र्यौ!
Published on: ४ कार्तिक २०७८, बिहीबार २३:०९
काठमाडौं कर्मचारी लाई कालो मो‘सो द’ल्दै, कप‘डा च्यात्दै, भाँ‘टाले हिर्काउदै २ किलोमिटर हिडाउने जनमत पार्टीका प्रमुख डा. सि के राउत भन्छन् : जे गर्यौं सहि गर्यौं, यस्तो गर्नु बाहेक अब अर्को उपा‘य छैन। किसानलाई राहत दिने प्रतिवद्द्ता दिदै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा सुदुर पश्चिम बाट Live
थप विषयहरु सहितको विशेष कार्यक्रम भिडियो हेर्न सिधै तल जानुहोस्। तपाईको कुनै पनि सल्लाह सुझाब र प्रतिक्रियाहरु भए अवश्य पनि विभिन्न माध्यम बाट प्रतिक्रिया दिनु,,होला धन्यवाद।।अब नयाँ भाग भिडियो हेर्न सिधै तल जानुहोस्
थप समचार आजको ८औ भाग कार्यक्रमको भिडियो अन्ति ममा राखिएको छ हेर्नुस पूरा भाग। काठमाडौं -कार्यक्रम सकि ए पछि रबिले यसरी टुईट गरे २५५ दिनपछी आफ्नो कार्यक्रम लिएर आएको छु, त्रुटि कमजोरीहरु टन्नै छन्। दुबई जे,ल,,मा फ,,सेका एक नेपालीको पीडा, से,क्स स्क्या,न्डल‘ मा फसेका मन्त्रीको स्टिङ अ‘प,रेसन
मुहार मा पनि अर्कै चमक देखिएको थियो।सोहि समयमा रविले न्युज २४ मा पनि का,र्यक्रम चलाउने गर्दथे”। “के,,हि महिना अगाडी मात्रै टेलि भिजन छाडेर आफ्नै टेलिभिजन खोल्न लागे का लामिछानेले अर्को रे,कर्ड कायम गरेका हुन्।
रविले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट मा २ ह”जार ऋण क,,सरी २५” लाख सम्म पुग्यो भनेर उक्त भिडियो सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए ।गरिबलाइ ठग्नेको उनले पर्दाफास गरेका हुन्भिडियो सामाग्री हेर्नुस। अब नयाँ एप्पिसोड भिडियो हेर्नुस्!